စောရန်နိုင်| December 13, 2012 | Hits:598
12 | | ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) က သိပ်ဆည်းရမိသည့် Carl Gustaf ရော့ကက် လောင်ချာ (ဓာတ်ပုံ – ဂျွန်စံလင်း)
ကချင် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ရေးရုံး ဖွင့်လှစ်
9 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website မင်းကြီးညို December 13, 2012 - 4:19 pm	ဒေါ်လာပေးရင် မည်သည့်လက်နက်မျိုးကိုမဆို မှောင်ခိုဈေးကွက်မှာ ၀ယ်လို့ရတယ်။ မင်းတို့
Reply	unhcrricky December 14, 2012 - 6:47 pm	ဒါက ပြည်တွင်းစစ်ပါ…..မင်းပြောပုံအရဆိုရင် ကချင်င်္နိင်ငံကို လာတိုက်သလို ဖြစ်နေပြီနော်
Reply	တောက်တဲ့ December 25, 2012 - 1:46 pm	နင်လား ငါလား စစ်ဖြစ်နေပြီဆိုမှတော့ ဟိုသေနတ်ကြီးနဲ့ ပစ်လို့ .. ဟို ရဟတ်ယဉ်ကြီးနဲ့ သမလို့ … ဟိုအမြောက်ကြီးနဲ့ ဆော်ပလော်တီးလို့ ဆိုပြီး အော်ငိုနေစရာ မဟုတ်ဘူး ထင်တာပဲ .. သူ့လူ ကိုယ့်လူတွေ သတ်နေ သေနေကြတဲ့ဟာ … မဖြစ်ချင် အစောကြီးထဲက အကဲမပိုနဲ့ပေါ့ ..
Reply	pps12345 December 13, 2012 - 5:57 pm	အမေရိကန်က ဦးနေ၀င်း အစိုးရ ကို တိတ်တိတ် ပုန်းထောက်ပံ့ခဲ့တာတော့ ပေါ်ပြီ။
Reply	မြန်ပြည်သား December 13, 2012 - 6:16 pm	given by china
Reply	ပလဲငွေရောင် December 14, 2012 - 8:23 am	ကချင်တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်လူသူ မဲ့ပြီး ခြံစည်းရိုးချဲ့ ခြင်သူတွေအကြိုက် ဖြစ်နေပါပကော။
Reply	moejoo December 14, 2012 - 11:12 am	next time u will face with U.S.A made weapons.K I A must thinking rightly.
Reply	kkkkio frend December 16, 2012 - 8:17 pm	Well done KIA.
Reply	ချင့်ယုံ December 18, 2012 - 1:32 pm	တိုက်ပွဲဖြစ်တာလက်နက်ကြီးမသုံးရလို့ဘယ်သူပြောလဲ၊အဲဒါဘဇူကာလိုနောက်ပွင့်လက်နက်ပဲ။